Yakachipa Fertilizer Linear Vibrating Screening Machine Vanopa uye Fekitori | YiZheng
Iyo Linear Vibrating Screener inoshandisa simba rinodedera sosi kubva kune vibration-mota, izvo zvinhu zvinozungunusa pachiratidziro uye kuenda kumberi munzira yakatwasuka.
Chii chinonzi Linear Vibrating Screening Machine?
Iyo Linear Vibrating Screener (Linear Vibrating Screen) inoshandisa kudedera kwemotokari kudedera senzvimbo yekuzungunusa kuita kuti zvinhu zvinyungudike pachiratidziri uye zvifambe kumberi munzira yakatwasuka. Izvo zvinhu zvinopinda muchikamu chekudyisa cheye ekuongorora muchina zvakaenzana kubva kune feeder. Masero akati wandei ekuwedzeredza uye ezasi anoburitswa neyakawandisa-skrini uye inoburitswa munzvimbo dzakasiyana.
Shanda Chinyorwa cheLinear Vibrating Screening Machine
Kana iyo linear skrini iri kushanda, iyo synchronous kutenderera kwemaviri mota kunokonzeresa iyo vibrate exciter kuti iite iyo yekumashure yekunyepedzera simba, kumanikidza iyo skrini muviri kufambisa iyo skrini kureba, kuti izvo izvo zvinhu pane izvo zvinhu zvive zvinofara uye nguva nenguva zvinokanda huwandu. Nekudaro kupedzisa iko kuongorora kwekuongorora. Linear vibrating screen inotyairwa nekaviri-vibration mota. Kana iwo mairi maviri anodedera achifananidzwa uye achichinjika zvine mutsindo, simba rinonakidza rinogadzirwa ne eccentric block rinomisidzana mu lateral direction, uye rakabatana simba rekufadza munzira yekureba rinotamirwa kune iyo skrini yese. Pamusoro pechinhu, nekudaro, iyo yekufamba nzira yemasefa mushini yakatwasuka. Iko kunongedzwa kwesimba rinonakidza kune kona yekurerekera zvine chekuita nepamusoro pechiso. Pasi pechiitiko chakabatanidzwa chesimba rinonakidza uye nekuzvidzora kwesimba, izvo zvinhu zvinokandwa kumusoro uye zvakasvetuka kumberi mukufamba kwakatsetseka pachiratidziri, nekudaro zvichizadzisa chinangwa chekuongorora nekuisa zvinhu.
Zvakanakira Linear Vibrating Screening Machine
1. Kuiswa chisimbiso kwakanaka uye guruva shoma shoma.
2.Kuderera kwesimba kushandiswa, ruzha ruzha uye hupenyu hwakareba hupenyu hwechidzitiro.
3. Kuongorora kwepamusoro, kugona kukuru kwekugadzirisa uye chimiro chakareruka.
4. Yakanyatso kuvharirwa dhizaini, otomatiki kubuda, inokodzera gungano mutsara mashandiro.
5. Zvikamu zvese zvemuviri wechidzitiro zvakasungwa nesimbi simbi uye chimiro (mabhaudhi akabatana pakati pemamwe mapoka). Iyo yakazara kuomarara yakanaka, yakasimba uye yakavimbika.
Linear Vibrating Screening Machine Vhidhiyo Ratidza
Linear Vibrating Screening Machine Model Sarudzo
(R / Maminitsi)
Pashure: Michina Drum Sieving Machine
Zvadaro: Rubha Bhandi Conveyor Machine
Zvinokambaira Type Organic Waste Composting Turner Ma ...
Nhanganyaya Crawler Type Organic Waste Composting Turner Machine Overview Crawler Type. Izvo zvinhu zvinoda kuti zviunganidzirwe mudura, ipapo zvinhu zvinomutswa uye cr ...
Nhanganyaya Chii chinonzi Organic Fertilizer Round Polishing Machine? Yekutanga organic fetiraiza uye macomputer fetiraiza granules ane akasiyana maumbirwo uye hukuru Kuti tiite iyo granules granules iratidzike yakanaka, kambani yedu yakagadzira organic fetiraiza polishing muchina, mukomboni fetiraiza polishing muchina uye nekudaro ...
Nhanganyaya Chii chinonzi Chemical Fertilizer Cage Mill Machine inoshandiswa? Iyo Chemical Fertilizer Cage Mill Machine ndeye wepakati-saizi yakatetepa yakatwasuka keji mill. Muchina uyu wakagadzirwa zvinoenderana nesisitimu yekukanganisa kupwanya. Kana emukati uye ekunze emakeji tenderera kwakapesana nekumhanya, zvinhu zvakapwanywa f ...